Ny Fiainana Any Sierra Leone Telo Andro Taorian’ny Fanokana-Monina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Oktobra 2014 2:31 GMT
Vakio amin'ny teny русский, srpski, Español, English
Ebola any Sierra Leone, Afrika Andrefana, 20 Jona 2014, avy amin'i Tommy Trenchard, Demotix.
Maro no nitsikera fa tsy azo tanterahana tsotra izao na tafahoatra loatra ilay fepetra noraisin'ny fitondrana any Sierra Leone rehefa nambarany ny heviny fa tsy mahazo mivoaka ny tranony ny vahoaka enina tapitrisa mandritra ny 72 ora. Nampitandrina ny fikambanan'ny mpitsabo iraisam-pirenena mpanao asa soa “Medicine Without Borders” na ny fitsaboana tsy voasakan'ny sisintany, fa mety hanampy amin'ny fihanahan'ny valan'aretina io fepetra io raha toa ka manafina tranga vaovao.
Na izany aza anefa dia milaza ny governemanta fa fahombiazana io hetsika io. Tsy misy mahazo mivoaka ny tranony mandritra io fanokana-monina manomboka ny 19 ka hatramin'ny 21 Septambra io mba hahafahan'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpiasa an-tsitrapo mampianatra ny olona isam-baravarana ny momba io valan'aretina io.
Mpiasa an-tsitrapo 30.000 eo ho eo no nanampy tamin'ny fampianarana ireo fianakaviana nandritra ireo telo andro ireo, nizara savony sy namantatra izay narary sy maty. Nahavory angona an-tsoratra miavosa ho ampiasaina amin'ny ady atao amin'ity aretina ity ny governemanta tamin'ny fiafaran'ilay fanokana-monina. Vinavinain'ny mpitondra fa maherin'ny iray tapitrisa ny tokantrano nanaovana fanadihadiana ary 130 no tranga vaovao hita.
Efa 600 izao no fantatra fa matin'ny Ebola any Sierra Leone, midika izany fa iray amin'ireo firenena tena voa mafy i Siera Leone. Ny kajin'ny Sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fahasalamana dia milaza fa ireo 3.083 maty tamin'ireo 6.553 marary dia tany Siera Leone, Liberia ary Ginea.
Tantarain'i Umaru Fofana, mpanao gazety sady mpiaro ny fahalalahan'ny fanehoan-kevitra any Siera Leone ary nalefany ao amin'ny Facebook ity hafatra manaraka namaritany ny fahitàna ireo tranganà Ebola vaovao :
VAOVAO TAPATAPANY : Nahitàna trangana valan'aretina Ebola 130 voamarina, miaraka amin'ireo valinà fizahana 39 mbola andrasana, ilay fanokana-monina nanerana ny firenena. Lazain'i Stephen Gaojia fa 22 no tranga voarakitra ny andro voalohany, 56 ny andro faharoa ary 52 ny andro farany
Andro vitsivitsy talohan'ny nanombohan'ilay fanokana-monina dia niteny tamin'ny firenena ny Filohan'i Sierra Leone, i Bai Koroma, nangataka ny tsirairay mba hanao izay azony atao hiadiana amin'ilay valan'aretina, ary nanamafy ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fahafantarana ny fomba hisakanana ny fifindran'izany amin'ny tena sy amin'ny hafa.
Nohamafisin'ny filoha fa mifindra amin'ireo olona mandray andraikitra amin'ny fanatrehana fandevenana, famangiana any amin'ny hopitaly ary fikarakarana marary io valan'aretina izay avy amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina io.
Izao no nosoratan'i Albert Mackoty amin'ny fanehoankeviny momba ilay sary mahavaky fon'ilay mety ho mararin'ny Ebola mivavaka ho an'ny fianakaviany marary eo ivelan'ny foiben'ny toeram-pitsaboana :
Tsy ny taham-pahafatesana avy aminy, tsy ny firongany, tsy ny fomba famonoany mampahatahotra, tsy ny fifindrany mora na ny fandrahonan'ny fiovàny endrika no mampihorohoro amin'ny poizin-tsela Ebola fa na dia ireo olona mikarakara aza dia saika tsy afaka manao na inona na inona afa-tsy ny mipetraka maka sisiny sy mandinika.
I Finda io, marary iray ahiana ho voan'ny Ebola, mivavaka ho an'ireo fianakaviany marary mialohan'ny andefasana azy ireo any amin'ny toerana fitsaboana ny Ebola any amin'ny Mpitsabo tsy Voafetran'ny Sisin-tany. Amin'ny maha-havana anao inona ihany koa no azonao atao ? Mahavaky fo izany.
Ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra izay mahatratra 35.1%, ireo fomba amam-panao sasany iombonan'i Afrika Andrefana toy ny fanadiovana/fanasàna, ny fikasihan-tànana ary ny fanorohana ny sisan'ireo maty no mbola manamafy ny olan'ny Ebola any amin'iny faritra iny.
Nosoratan'i Umaru Fofana ao amin'ny Facebook ny ohatra iray amin'ny fiantraikan'ny valan'aretina amin'ny toekaren'ny tanàna iray :
Tanàna iray manontolo izay ny toekareny dia miankina amin'ny fivezivezen'ny olona ao ka mijanona mividy voankazo, legioma, ary vodin-javatra fanao sakafo no natoka-monina 21 andro. Niaritra fahafatesana maro vokatry ny poizin-tsela Ebola ny Moyamba Junction (toby fandraisana fiara fitaterana mankany amin'ny faritra) hatramin'ny nifindran'ny aretin'ilay marary iray taminà mpiasan'ny fahasalamana iray. Samy maty izy roa. Tsy misy fiara mahazo mijanona eo ary tsy misy olona mahazo miala ihany koa.
Ankoatry ny tahotra sy ny henatra mifandraika ami'ny Ebola dia misy ihany koa tranganà herisetra atao amin'ny marary. Nozarain'i Isaac Osman Kargbo ny hafatr'i Victor Sawyerr momba io resaka io :
Tsy Fanamelohana Ho Faty akory ny Fiahiahiana anao!!!! Tsy tanako ny ranomasoko rehefa nahita ireo ahiahiana ho mararin'ny Ebola ampijaliana sy ampiharana herisetra aho. Tahaka izay efa niseho, tranga telo (3) samy hafa no hitako tsy nahy izay nampijaliana ara-batana sy nitenenan-dratsy ireo ahiana ho marary. Any amin'ny toerana samy hafa dia heno ny teny mafin'ireo mpiambina sasany manakiana mafy ireo ahiana ho marary hoe ny làlan-dratsin-dry zareo ihany no nahazoany ny aretina. Tena mahonena ireny tranga ireny ka dia tsy tanako intsony fa dia latsaka ny ranomasoko.
Te-hametraka fanontaniana aho amin'ireny zavatra ireny :
i. Moa ve mpanao heloka bevava ny mararin'ny Ebola amin'izao fotoana izao ?
ii. Moa ve tsy fianakaviantsika, namantsika ary olona akaiky antsika intsony izy ireny ?
iii.Inona no heloka nataony ?
iv. Fantatrareo ve, firy amin'ireny tranga ireny no hita fa tsy izy akory ?
Misy tantara iray hafa any amin'ny Farany Atsinanan'i Freetown izay namiravirann'ny mpiasan'ny fahasalamana iray ity raim-pianakaviana iray maty anaka sy ny nilazàny fa matin'ny Ebola ilay zaza ka tokony hiomana ny ho faty koa izy satria mitondra ny tsimok'aretina. Mahavariana fa tamin'ny fotoana tsy mbola nahalalàna mazava tsara ny antony nahafaty ilay zaza no nisehoan'izany rehetra izany. Ireo tranga ireo sy resaka maro samihafa no mifamahofaho ao an-tsaiko ary mbola itadiavako valiny. Tsy miteny aho hoe tokony ho kasihana sy itankosenana ry zareo fa ny zavatra nolazaiko dia ny hoe tokony tolorana saina ry zareo fa tsy fanamelohana ho faty ny fiahiahiana azy. Izany no antony handàvan'ny olona ny hivoaka rehefa marary izy ireo.
Ao anatin'ny ezaka iadiana amin'ny fanavakavahana ireo mararin'ny Ebola any Sierra Leone, dia nihantsy ady amin'ny tsy faneken'ny fiarahamonina azy ireo sy nanolotra fonosana fanampiana ho an'ireo olona dimy sitrana izay navoakan'ny toeram-pitsaboana Connaught ny Minisitry ny Fahasalamana sy Fanajariana, ny Dr Abu Bakarr Fofanah. Nomena Le1.500.000 ( eo ho eo amin'ny 340 Dolara amerikana) avy ny tsirairay nentiny nody, amim-pitiavana be avy amin'ny fitondrana, ho fanampiana amin'ny zavatra tena ilaina sy ho fampitsaharana ny fanavahana mahazo vahana eo amin'ny fiarahamonina .
Raha tsy resahana ny fanokana-monina tany Sierra Leone, ny sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fahasalamana (OMS) dia nilaza tao amin'ny gazety miteny Frantsay “L'Express” ny fiantsoany ireo firenena voakasiky ny poizin-tsela Ebola mba handray fepetra izay “mifanaraka sy mifototra tsara amin'ny zava-misy”. Na izany aza, maro ireo mpanara-maso no nihevitra io fepetra io ho fahombiazana satria nahafahan'ny mpiasan'ny fahasalamana nifandray tamin'ny telo ampahefatry ny tokantrano ary nahafantarana olona maro be nahiana ho marary.
Ny 21 Septambra, nilaza ny (EOC) Foiben'ny Hetsika Vonjitaitra an'ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny Fanajariana fa maherin'ny 75 isan-jaton'ny tanjon'ny fandaharan'asany no tratra, ny fitsidihana tokantrano manodidina ny 1.5 tapitrisa manerana ny firenena miaraka amin'ny fitaovana fampianarana momba ny Ebola.
Mbola hisy asa fanentanana sahala amin'iny hatao any amin'ireo toerana mafana any Sierra Leone. Vao haingana teo izao dia nanambara ny Filoha Koroma fa mbola hitohy any Port Loko sy ny distrikan'i Bombali any avaratra, sy any amin'ny distrikan'i Moyamba any atsimo ny fanokana-monina. Olona 1.2 tapitrisa no voakasik'izany mandritra ny fotoana tsy voafetra.